Facebook Original ကြီးကိုသုံးရတာ စက်ဟန်းတယ် Logout ဖြစ်တယ် ဆိုဒ်ကြီးလို့ဆိုပြီးအဆင်မပြေဖြစ်နေသူများအတွက် အခုအဲဒါတွေကိုပြေလည်အောင်သုံးလို့ရမဲ့ Application လေးကိုရှာဖွေပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
ကဲAndroid User တွေ Facebook Default ကြီးကိုသုံး၇တာ Logout ခဏခဏ ဖြစ်လို့အဆင်မပြေကြဘူးဆို
ဖေ့ဘုတ်ဖိုင်ဆိုဒ်ကလဲအရမ်းကြီးလာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ တစ်ချို့နိမ့်မတဲ့စက်တွေဆို FoceClose ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ် အခုအဲဒါတွေကိုပြေလည်အောင်သုံးလို့ရမဲ့ Application လေးကိုရှာဖွေပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် သုံးရတာ တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်
သူ့ရဲ့Style UI interface ကလဲတော်တော်လေး Smart ကျတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် Facebook feature တွေလဲ
အကုန်သုံးလို့ရတယ် အခုကျနော်တို့သုံးတဲ့ပုံစံနဲ့လဲတော်တော်ဆင်ပါတယ် အရောင်လေးတွေတော့ကွဲသွားတာပေါ့ သုံးရတာအကုန်တူတူပါဘဲ ထူးခြားတာက ဒီကောင်လေးကဆိုဒ်သေးသေးလေးနဲ့ သုံးလို့ရတာပါဘဲ Playstore မှာလဲသွားရောက်ကြည့်နိုင်ပါတယ်
ကိုယ.်ထားချင်တဲ့ Theme ဒီဇိုင်းထားပြီးသုံးလို့ရတော့တော်တော်များများကြိုက်ကြလိမ့်မယ်ထင်တယ်
ကျနော်စိတ်ထဲံမှာတော့ ဒီကောင်လေးကိုသုံးရတာ ဆိုဒ်သေးတယ်စက်မလေးဘူးကြည့်ရတာရှင်းတယ် ကာလာလေးတွေကိုကြိုက် ကျေနပ်တဲ့စိတ်ခံစားမှုတစ်ခုတော့ဖြစ်ပါတယ် သူငယ်ချင်းတွေလဲစမ်းပြီးသုံးကြည့်စေချင်လို့တင်ပေးလိုက်တာပါ အောက်ဆုံးမှာဒေါင်းလော့ရယူနိုင်ပါတယ်
အောက်ကလင့်စ်က Playstore လင့်စ်ပါသွားရောက်လေ့လာချင်သူတွေအတွက်
» Intuitive touch navigation
» Post on your friends walls and update your own status
» Post images, checkin and links on your wall
» Share your friends posts and images
» Comment and like postings of your friends
» Browse your newsstream
» Check out your friends profiles/galleries/wall
» Facebook notifications that are everywhere accessible via dropdown menu
» Send and receive private messages from within the app
» See RSVPs of other users to events
Flipster asks you to give multiple Facebook permissions in order to function correctly. Those permissions are only used to show friends profiles, images, newsstream to you.
No information will be stored or transferred anywhere but on your own device. We strongly believe that users should have full control over their data and Flipster follows this principle.
အမှားပါရင် ဝေဖန်အကြံပေးတဲ့အနေနဲ့ comment ရေးပေးသွားပြီးအကြံပြုပေးသွားစေချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်ကလည်းကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင် တစ်ယောက်မဟုတ်လေတော့ကာခွင့်လွှတ်ပေးကြပါလို့... စေတနာအပြည့်နဲ့ အလကား ပေးချင်ရုံ သက်သက်ပါလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အဆင်ပြေကြပါစေ...ဆက်လက်ကြိုးစားပါအုံးမည်....
ရေးသားသူ itpalacecomputer at 5:46 AM